Taliye Xijaar oo shir deg deg ah isugu yeeray saraakiisha Booliska Soomaaliyeed. | Warbaahinta Ayaamaha
Taliye Xijaar oo shir deg deg ah isugu yeeray saraakiisha Booliska Soomaaliyeed.
Muqdisho-Ayaamaha-Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed, Generaal Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa farriin u diray saraakiisha Booliska Soomaaliyeed, waxaana uu isugu yeeray shir deg deg ah, sida ay noo xaqqijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo.
Lama shaacin ujeedka kulankan, balse waxa ay u badan tahay in looga hadlayo xaaladaha soo kordhay iyo xiisadda ka dhalatay Qadiyada Ikraan Tahliil Faarax.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya, iyada oo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqadii ka joojiyey agaasimihii guud ee NISA, sidoo kalena madaxweynaha muddo xilkeedkiisu dhammaaday uu kasoo horjeestay, arintaas oo keentay inay ka sii darto xiisada ka jirta dalka.
Khilaafka iminka soo shaac-baxday ayaa durbo saameyntiisa laga dareemay dalka waxaana la ogeyn halka uu biyo shuban doono muranka ka dhashay shaqo joojinta Fahad Yaasiin iyo dilka la sheegay inay Al-Shabaab u geysteen Ikaraan Tahliil Faarax.